SOOMAALIYA OO OGOLAATAY IN SOOMAALILAND AFTI LAGA QAADO
Saturday August 10, 2019 - 08:48:03 in Maqaallo by Wariye Tiriko
SOOMAALIYA OO OGOLAATAY IN SOOMAALILAND AFTI LAGA QAADO Tan iyo markii uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilahi farmaajo ku dhawaaqay samaynta gudiga wadahadalka soomaaliya iyo soomaaliland oo ay ku keliftey cadaadis aad u heer sareeya oo ay ku kelifeen dawladaha waaweyn sida ingiriiska iyo maraykanka iyo guud ahaan beesha caalamku oo ka dhalatay badi dhaqdhaqaaqii siyaasadeed ee ay samaysay soomaaliland iyo soomaaliya oo dhamaan socodka arimadeeda siyaasadeed ku xidhmeen soomaaliland wadahadalkeeda ayaa waxaa soconaayey shirir isdabajooga oo ay kaga tashanayeen gacanku hayayaasha siyaasada soomaaliya (talyaaniga butlaan iyo madaxweyne farmaajo) mawqifka midaysan kuna kalsoon yihiin ee ay ku wajahayaan wadahadalka labada dal iyo waxyaabaha kasoo bixikara nuqsaan iyo faa,iidoba iyo weliba beesha caalamka ee aan iyaga ahayni siday u rabaan wadahadalka iyo ujeedada ayka leeyihiin mustaqbalka inay ku danbayso .
Hadaba wadahadal dheer maalmo badana soconaayey waxay go,aamiyeen sidii caadada u ahayd weligoodba inaanay marnaba suurtogal ku iman in soomaaliland awood siyaasadeed ku dhexyeelato soomaaliya ahna tii ay ilaa lixdankii kala dagaalamayeen isla markaa dawladaha soomaaliland gacan saarka buuxa la lihina doonayaan in awooda dalka lagu wareejiyo soomaaliland taasoo ah mid aan soomaaliya marnaba ka suurto geleyn .
Hadaba gacanku hsyayaasha siyaasada soomaaliya waxay go,aan buuxa ku gaadheen in wadahadalka soomaaliya iyo soomaaliland si degdega loo furo laysna hortaagin halkii laysku raaco iyadoon soomaaliland iyo beesha caalamka midna la tusin wax ishoodu diido isla markaana aanay dhicin gebi ahaanba wax gorgortan iyo is qabqabsi iyo jiitan danbe midna ee la weydiiyo soomaaliland waxay doonayaan midnimo iyo go,taan kay rabaan .
Hadaba haddii ay yidhaahdaan waxaan rabnaa go,itaan in beesha caalamka lagu wargeliyo inay afti dadweyne ka qaadaan iyagoo iyagu wata xisaab gaara oo ay filayaan inay ugasoo dhex bixi doonto soomaaliland aftideeda , haddii ay yidhaahdaan waxaan rabnaa midnimo in ay markaana miiska u taal wixii soomaaliya ku heshiisey ee ahaa 4.5 taasoo ay soomaaliland ku metelayeen dad markii la samaynayey ilaa hadana kula joogaan .
Hadaba kolkaan usii dhabagalay xisaabta ay haystaan inay ugasoo bixi doonto waxay ku sheegeen in ay haystaan harti waqooyi , garxajis , samaroon , iyo ciise halka ayka maqan yihiin oo keliya habarjeclo ,awal iyo arab waasida aan xogta ku heleyno ee ay sheegeen . Hadaba haddii ay aftida ku guulaystaan soomaaliya oo helaan 51 % iyo wixii ka badan soomaaliya marnaba caalamka iyo cidkale toona kama ogolaanayso in wax gorgortan manaasiib ahi dhacaan , waana si meesha looga saaro maraykanka iyo ingiriiska inay soomaaliya ku lug yeeshaan . Haddii ay aftidu u dhacdo in soomaaliland go,itaan u codeeyaan way ogolaanayaan si ay meesha uga baxdo saamaynta la doonayo in soomaaliland ku dhexyeelato soomaaliya si wadamada la socdaana u raacaan soomaaliland soomaaliyana faraha ugala baxaan , hadalkaasna waxaa si dadban loogusoo dhiibey raysal wasaare ku xigeenka soomaaliya oo sheegay inay soomaaliya iyo soomaaliland ku kala baxayaan afti dadweyne ee aanay dib wakhtiga shacabka uga dilidoonin .
Hadaba soomaaliya ujeedada ugu weyn ee ay ka leedahay aftida shacabka soomaaliland waa arimahan : (a) in ay la dagaalanto in wadamada soomaaliland ku xidhan tahay (maraykanka iyo ingiriiska ) aanay soomaaliland soo dhexdhigin soomaaliya iyagoo usameeyey awood siyaasadeed oo ay soomaaliya ku dhex leedahay iyaguna dusha kaga maamulaan taasoo si hawlyar iyaga (gacanku yayaasha siyaasada soomaaliya ) meesha uga saaraysa . (b) inay soomaaliland iyo wadamada la socdaba debeda uwada tuuraan si ay soomaaliya faraha ugala baxaan wadamadaasu haddii shacabku go,taan u codeeyaan .(c) inay masuuliinta soomaaliland iyo wadamada la socdaba cidla diraan haddii shacabku midnimo u codeeyo . Waxaase hubanti ah inay isku raaceen afti soomaaliland laga qaado wadahadalkana lagu bilaabo in afti lagu kala boxo .
Qore: maxamed aadan